Wafdi uu hoggaaminayay Safiirka Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya oo hargaysa gaaray? * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A A warsame	 Last updated Jun 30, 2017
Wafdi uu hoggaaminayay Safiirka Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya ee fadhigiisu yahay Nairobi Stephen Schwartz, ayaa maanta socdaal ku tagay magaalada Hargeysa.
Safiirka waxaa socdaalka ku wehelinayay madaxa hay’adda Maraykanka u qaabilsan caawimooyinka dibedda ee USAID.
Wafdigan ayaa kulamo la yeeshay ku-simaha madaxweynaha Soomaaliland, ahna madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi (Saylici), golaha wasiirada iyo sidoo kale guddida doorashada.
Kulankaa Kaddib ayeey warbaahinta u sheegeen ujeeddada socdaalku in ay la xiriirto doorashooyinka la filayo in ay qabsoomaan iyo arrimo kale.